Dhimmi barsiifatawwan miidhoo ammas xiyyeeffannaa barbaada
Dhimmi barsiifatawwan miidhoo ammas xiyyeeffannaa barbaada Featured
Kittaannaan dubartootaaf balaa malee falaa miti
Dubartootni biyya keenyaa waggoota dheeraadhaaf rakkoolee hawaasummaa garagaraa keessa kan turan yemmuu ta’u, ammaan tanas guutummaatti rakkoolee kanniin jalaa bahuu hindandeenye.
Dhaqna qabaan dubartootaa rakkoo yeroo dheeraaf dubartoota balaa garaa garaatiif saaxilaa ture yemmuu ta’u, dubartootni kunniin isaan dhaqna hinqabamneen walbira qabamanii yemmuu ilaalaman wayitii da’umsaatti ciniinsuun irra turuufi rakkoolee birootiif caalaatti kan saaxilaman ta’uu ragaaleen ni mul’isu.
Ijoollee dubaraa umriin isaanii heerumaaf osoo hinga’in heerumsiisuunis barsiifatawwan boodatti hafoo yeroo ammaa dubartoota miidhaa jiran keessaa isa tokko yemuu ta’u, sochiiwwan waggoota muraasa darban keessatti taasifamaniin hamma tokko xiqqaatus rakkinichi ammas iddoowwan tokko tokkotti bal’inaan kan mul’atu ta’uu Ministeerri Dhimma Dubartootaafi Daa’immanii ni ibsa.
Ministeerichi barsiifatawwan boodatti hafoo dubartootaafi daa’immanirratti dhiibbaa geessisaa jiran hundeedhaan haala furuun itti danda’amurratti qaamota dhimmichi ilaalu waliin Magaalaa Hawaasaatti dhiheenya kana mari'atee ture.
Waggoota kurnan lamaan darbanitti hirmaannaan dubartootaa damee hundarratti guddachuu irra darbee guddina biyyaa irraayyis fayyadamoo ta’uusaanii kan himan ministir de'eetaa ministeerichaa, Aadde Alamituu Umadi.
Akka isaan jedhanitti, sagantaalee kunuunsaafi eegumsa daa’immanii hedduu hojirra oolchuudhaan daa’immaniif faayidaa akka kennaniifis hojiileen danuun hojjatamaniiru.
Hojiiwwan garagaraa bal'inaan hojjatamaa turanis garuu rakkooleen kunniin ammas iddoowwan tokko tokkotti bal'inaan kan mul'atan ta'uus ni ibsu.
Rakkoolee dubartootaafi daa’imman irra gahaa jiran kanneen hundeedhaan furuuf sochii taasufamu keessatti shoora olaanaa kan taphatan abbootii amantii, abbootii Gadaafi ijaaramoota hawaasa garagaraa ta’uu himanii, qooda fudhattoonni kunniin sochiiwwan tanaan dura dhimma kanarratti taasisaa jiran daran cimsuu akka qaban ibsu.
Iddoowwan tokko tokkotti barsiifatoonni miidhaa dubartootarraan gahan kunniin hir’achuu dhiisanii dabalaa akka jiran kan himan immoo ministeerichatti Qindeessituu Garee Hubannoo Uumuufi Sosochii kan ta'an Dubree Maahdar Bitaawu. Gochichi naannolee akka Gaambeellaafi Somaalee Itoophiyaatti bifa jijjiirrataa ammas babal’achaa jiraachuu dubbatu.
Walumaagalatti, addunyaa har'aa keessatti tasumaa fudhatama kan hinqabne barsiifatawwan boodatti hafoo kanneen hundeedhaan balleessuun dhimma yeroon gaafatuudha.
Torban kana/This_Week 7216
Guyyaa mara/All_Days 1291727